သတိပြုစေချင် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin)
အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ဟူသော စကားလုံးသည် Aspergillus flavus မှို နှင့် toxin (အဆိပ်) စကားလုံးနှစ်လုံးကိုပေါင်းစပ်ခေါ်ဝေါ်သော လက်တင် စကားလုံးဖြစ်သည်။ အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) သည် မှိုများမှထုတ်လုပ်သော အဆိပ် ၊ မိုက်ကိုတော်ဆင် (Mycotoxin) တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ထို အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) များသည် အလွန်အဆိပ်ပြင်းထန်သော ဓါတ်ပေါင်းများဖြစ်ပြီး လူနှင့်အခြား တိရစ္ဆာန်များကို ချက်ခြင်းအဆိပ်သင့်ပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သလို နာတာရှည်အဆိပ်သင့်ကာ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေ၍ အသက် ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံများတွင်ကျရောက်ဖျက်ဆီးတတ်သောမှိုရောဂါများဖြစ်စေသည့်မှိုအမျိုးမျိုးအနက် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) အဓိကထုတ်သောမှိုများမှာ Aspergillus flavus နှင့် Aspergillus parasiticus တို့ဖြစ် ကြသည်။ အခြားAspergillus မှိုမျိုးရင်းဝင်များဖြစ်သော Aspergillus nomius and Aspergillus niger တို့သည်လည်း အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ထုတ်ကြသည်။ Aspergillus မှိုမျိုးရင်းဝင်မှိုများသည် မြေကြီး၊ သီးနှံပင်ကြွင်းပင်ကျန်များ နှင့်လေထဲတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။ ကမ္ဘာကြီး၏ ပူနွေး စွတ်စို သော နေရာဒေသများ တွင်၎င်းမှိုများ ပေါက်ရောက်မှုများသည်။
၎င်းမှိုများသည် စိုက်ပျိုးသီးနှံအများစုနှင့်သိုလှောင်သီးနှံများတွင်ကျရောက်တတ်သည်။ အစိုဓါတ် အနည်းငယ်နှင့် အပူချိန် (၁၃-၃၇) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်တွင်ပေါက်ပွားနိုင်ပြီး အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) များထုတ်လုပ်နိုင် သည်။
အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) များ တွင် B1, B2, G1, နှင့် G2 ဟူသောအမျိုးအစား (၄) မျိုးရှိပြီး သဘာဝ အတိုင်းအစားအစာများတွင်တွေ့ရသည်။ ၎င်းတို့အနက် B1 အမျိုးအစားသည် အစားအစာများ တွင်အများဆုံး တွေ့ရပြီး အလွန်အဆိပ်သင့်စေတတ်ကာ လူကို ကင်ဆာဖြစ်စေသည်။ ၎င်းအပြင် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်သောအစာများကိုစားသောက်ရသော နို့စားနွားများမှ ထုတ်လုပ်ရရှိသော နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများတွင် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) မှဆင်းသက်လာသော ဓါတ်ပေါင်းဖြစ်သည့် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) M1 နှင့် M2 အမျိုးအစားများပါဝင်သည်။
၁၉၆၀ တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ကြက်ဆင် အကောင် တစ်သိန်းနှင့်အခြားကြက်ခြံများမှကြက်များတပြိုင်နက် သေဆုံးရာမှ ကျွေးသောအစာ(မြေပဲပါဝင်သောအစာ)မှ အဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ကြောင်းခြေရာခံမိပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ထိုအစာများတွင် အဆိပ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှာ အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိနိုင်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် လူပေါင်း (၄၀၀) ခန့် သည် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin ) ပါဝင်သော ပြောင်းများကိုစားသုံးပြီးနောက် အသည်းရောင်အသားဝါဖြစ်ကာ ဖျားနာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူပေါင်း (၁၀၀) ကျော်သေဆုံးခဲ့သည်။ ကင်ညာနိုင်ငံတွင်လည်း ၂၀၀၄ ခုနှစ်၌ အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုးလူပေါင်း (၃၁၇) တွင်ဖြစ်ပွား ရာ (၁၂၅) ယောက် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ ဖြစ်သောနှံစားသီးနှံများ၊ ဆီထွက်သီးနှံများ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့် အခွံမာအသီး၏အဆံများမှထုတ်လုပ်သောအစားအစာပစ္စည်းများတွင် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်နိုင်လေသည်။ သင့်လျော်သောသိုလှောင်မှုအခြေအနေမရှိသောနှမ်း၊နေကြာ၊ပြောင်း၊မြေပဲ၊ငရုတ်၊ ဂျုံ၊ ပဲပုပ်၊ ငရုတ် ကောင်း၊ အသီးခြောက်များ၊ဝါစေ့၊ ၊ ကွမ်းသီး၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ သဖန်းသီး၊ သလဲသီး၊ ပီလောပီနံနှင့် အဆံပါသောအသီးများ စသည်တို့တွင် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်နိုင်သည်။ နို့၊ ချီးစ်နှင့် အခြားသောနို့ထွက်ပစ္စည်း များသည်လည်း အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်နိုင်မှု အန္တရာယ်မြင့်မားသည်။ ကမ္ဘာကြီး၏ ပူနွေးသော ဒေသများမှကုန်ပစ္စည်းများတွင် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်မှု အမြင့်မား ဆုံးကိုတွေ့ရပြီး ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုနှင့်လွန်စွာဆက်စပ်လျှက်ရှိသည်။
အစားအစာထုတ်လုပ်သောမူလကုန်ပစ္စည်းများတွင် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ထုတ်သော မှိုများ ပါဝင် မှုရှိပါက အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) သည် ဆက်လက်တည်မြဲနေပြီး ၎င်းမှထုတ်လုပ်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်း များတွင် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်နိုင်သောကြောင့်သတိထားသင့်ပေသည်။ ပမာအားဖြင့် မြေပဲထော ပတ်တွင် ဤပြဿနာကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
အန္တရာယ်ဖြစ်စေရန်လုံလောက်သောမြင့်မားသော အဖ်လာတော်ဆင်(Aflatoxin) ပမာဏရရှိပါက အော့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ အဆုတ်ထဲရေဝင်ခြင်းစသည်တို့လတ်တလောခံစားရတတ်သည်။ ရေရှည်တွင် အကြောဆွဲ၍ ခန္တာကိုယ် တုန်တက်ခြင်း၊မေ့မြောခြင်း၊ကင်ဆာဖြစ်ခြင်း၊ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အသက်ဆုံးသည်အထိ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အသည်းကို ထိခိုက်ပျက်ဆီးမှုအများဆုံး ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အခြားသောကိုယ်ခန္တာအစိတ် အပိုင်းဖြစ်သည့် အဆုတ်၊ ကျောက်ကပ်၊ ဦးနှောက်နှင့်နှလုံး တို့တွင်လည်း အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ပမာဏ ပါဝင်မှု မြင့်မားပြီး တစ်ခုခြင်း ပျက်စီးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ထုတ်သောမှိုတစ်မျိုးဖြစ်သော Aspergillus flavus သည် ခြောက်သွေ့သော ရာသီဥတုအခြေအနေတွင် စိုက်ပျိုးထားသောမြေပဲတွင်၎င်းမှိုကျရောက်မှုကိုအားပေးတတ်ပြီး ပြောင်းစိုက်ခင်း တွင် အင်းဆက်ပိုးတို့ကျရောက်ဖျက်ဆီးပါက Aspergillus flavus မှို ပိုမိုကျရောက်နိုင်လေသည်။ သီးနှံများ သိုလှောင်ရာတွင် အပူချိန် ၁၃-၃၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် အစိုဓါတ် (approximate minimum Aw 0.82) အနည်းဆုံး ၀.၈၂ ရရှိလျှင်ပင် Aspergillus flavus ပေါက်ပွားတတ်ပြီး အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ထုတ်လုပ်နိုင်လေသည်။
သိုလှောင်ထားသောသီးနှံများတွင် မှိုများပေါက်ပွားမှုနှင့်အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ထုတ်လုပ်မှုသည်လည်း အရေးကြီးသည်။ အထူးသဖြင့် သိုလှောင်သောသီးနှံသည် လုံလောက်သောခြောက်သွေ့မှုမရရှိခြင်း၊ အင်းဆက် ဖျက်ပိုးများကျရောက်မှုရှိခြင်းတို့ကြောင့်မှိုများပေါက်ပွားပျံ့နှံ့စေသည်။
အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) သည်ပြိုကွဲရန်မလွယ်ကူသည့် တည်မြဲနေနိုင်သော ဓါတ်ပေါင်းများဖြစ် သည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ပင်တည်မြဲနေနိုင်ပြီး အနည်းငယ်သာပြိုကွဲနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အပူပေးခြင်းနှင့် ချက်ပြုတ်ခြင်းတို့ ကြောင့် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်မှုအားလုံးပြိုကွဲပျက်ဆီးမှု မဖြစ်နိုင်ပေ။ ဥပမာအားဖြင့် ကော်ဖီစေ့ အား အပူချိန် ၁၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၁၀ မိနစ် အပူပေးရာ အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin B1) ပါဝင်မှု ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း သာလျော့ကျသွားသည်။
ပဲများ၊ အစေ့အဆံများအား အပူချိန် ၁၀၀ နှင့် ၁၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၉၀ မိနစ် အပူပေးရာ အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin B1) ပါဝင်မှု ၄၁.၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၈၁.၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ကျစေကြောင်းစမ်းသပ်တွေ့ရှိ ရသည်။ သို့သော်ထိုသို့အပူချိန်ကြာမြင့်စွာပေးခြင်းသည် ပဲများ အစေ့အဆံများတွင်ပါဝင်သော အဟာရဓါတ်များ၊ ဗီတာမင်များကို ပျက်ဆီးစေသည့်အတွက် အပူပေးခြင်းသည် တိကျသော၊ လိုအပ်သောဖြေခြင်းချက်မဟုတ်ပေ။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သောမြေပဲဆီ၊ နှမ်းဆီး များ (ဆုံဆီ နှင့် စက်ဆီ) တွင် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်မှု ရှိရ ခြင်းမှာ ဆီကြိတ်သောဆုံ (သို့) စက်များတွင် မှိုပေါက်ပွားမှုများရှိနိုင်သလို မြေပဲ၊ နှမ်းတို့တွင်လည်း ထိုမှိုများပါဝင်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ငရုတ်သီးမှုန့် ပြုလုပ်ရန်အတွင် ငရုတ်သီးများများသိုလှောင်ရာတွင်အစိုဓါတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးလျော့ချရန်ဖြစ် သော်လည်း၊ ခြောက်သွားပါက သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် အသီးများကွဲအက်ကာ အစေ့များထွက်ကျကုန်သဖြင့်အလေးချိန်လျော့သွားခြင်း၊ အစိုဓါတ်မရှိသဖြင့် အလေးချိန်လျော့သွားခြင်း စသည်တို့မဖြစ်စေရန်အတွက် အစိုဓါတ်ကိုလိုအပ်သလောက်မလျော့ခြင်းများကြောင့် မှိုပေါက်ပွားမှုကိုအားပေးစေသည်။ ၎င်းမှိုများပါဝင်သော ငရုတ်သီးများကို အမှုန့်ကြိတ်ပါက အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။
အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်မှုကို TLC (Thin layer chromatography), HPLC (High Performance Liquid Chromatography) နှင့် ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) စသော ခေတ်မီနည်းပညာများဖြင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ သို့သော် သီးနှံအစုအပုံများတွင်မှိုနှင့် အဖ်လာ တော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်မှုကို စမ်းသပ်ရာတွင် လုံလောက်သော နမူနာနှင့် ကိုယ်စားပြုနမူနာ ဖြစ်ရန် လိုအပ်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး((FDA) မှ အစားအစာများတွင် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်မှု သတ်မှတ်ထားသောနှုန်းထားမှာ သန်း၁၀၀၀ လျှင် ၂၀ (20 ppb) အထိသာ ပါဝင်ရမည် ဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်အစားအစာများတွင်မူ သန်း၁၀၀၀ လျှင် ၃၀၀ (300 ppb) အထိခွင့်ပြုထားသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများတွင် အစားအစာ၌ အမြင့်ဆုံးပါဝင်နိုင်မှုကန့်သတ်ထားသောနှုန်းထားမှာ သန်း၁၀၀၀ လျှင် ၄ - ၁၅ (4 to 15 ppb) ဖြစ်သည်။
မရိတ်သိမ်းမီ စိုက်ခင်း၌ပင် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်မှုကို ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ခြင်းသည် အကောင်း ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောစိုက်ပျိုးရေးနည်းလမ်းကောင်းများ Good Agricultural Practice (GAP) ကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ထုတ်လုပ်နိုင်သောမှိုပေါက်ပွားမှု၊ ပါဝင်မှုကို ထိန်းချုပ်ကာကွယ် နိုင်ပါသည်။
- သီးနှံများကို အလှည့်ကျစိုက်ပျိုးပါ။
- မှိုနှင့်အင်းဆက်ဖျက်ပိုးများခံနိုင်ရည်ရှိသော မျိုးများသုံးစွဲပါ။
- မျိုးစေ့ကို ဟိုမိုင်း၊ ကာဗင်ဒါဇင်၊ ဘီနိုမိုင်းစသောဆေးတို့ဖြင့်လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါကျရောက်မှုကို နှိမ်နင်းပါ။
- သီးနှံရင့်မှည့်မှုအဆင့်မှန်ကန်သောအချိန်နှင့် မှန်ကန်သင့်လျော်သောအစိုဓါတ်ရှိချိန်တွင် ခူးဆွတ်ရိတ် သိမ်းပါ။
ရိတ်သိမ်းချိန်နောက်ပိုင်းနှင့် သိုလှောင်ချိန်တွင်အရေးအကြီးဆုံးနှင့်ထိရောက်သောကာကွယ်နည်းမှာ အစိုဓါတ်ပါ ၀င်မှုကို ထိမ်းချုပ်သောနည်းဖြစ်သည်။
အစိုဓါတ်သင့်လျော်သောအချိန်တွင်ရိတ်သိမ်းခြင်း၊ ရိတ်သိမ်းပြီးသီးနှံများအား သိုလှောင်ရာတွင် သတ်မှတ်ထား သော အစိုဓါတ်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်မှိုများပေါက်ပွားမှုနှင့် အဖ်လာတော်ဆင်(Aflatoxin) ထုတ်လုပ်မှု ကိုတားဆီးပေးရာတွင် အလွန်အရေးပါသည်။ သိုလှောင်ရာ၌ ပြောင်းအတွက် ၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် လုံခြုံစိတ် ချရသောအစိုဓါတ်သည် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သော်လည်း မြေပဲအတွက်မူကား ၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဖြစ်သည်။ ထိုအစိုဓါတ်ကို သိုလှောင်ရာနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်ထိန်းသိမ်းထားရှိရန်လိုအပ်သည်။
အပူချိန် ၁၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်တွင် Aspergillus flavus မှိုပေါက်ပွားမှု နှေးကွေးသွားပြီး ၃၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် တွင် ပေါက်ပွားမှု အမြန်ဆုံးဖြစ်သည်။
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့တင်ပို့မည့် မြေပဲများတွင် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်မှုကို သန်း၁၀၀၀ လျှင် ၂၀ (၂၀ ppb) အထိသာခွင့်ပြုပြီး စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ သီးနှံကာကွယ်ရေးဓါတ်ခွဲ ခန်းမှ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ကာ လက်မှတ်များထုတ်ပေးလျှက်ရှိသည်။
ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရသောအစားအစာအတွက် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်မှုကို တရားဝင်အတည် ပြုပြဌာန်းထားခြင်းမရှိသေးသော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် ရောင်းချသော အစားအစာများတွင် အဖ်လာ တော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်မှုသည်လွန်စွာနည်းပါးသည်။
အစားအစာများတွင် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin) ပါဝင်မှုကို သာမာန်မျက်စိဖြင့်ခွဲခြားနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် အကောင်းဆုံးကြိုတင်ကာကွယ်နည်းမှာ အစားအစာများကို သေချာစွာစစ်ဆေးပြီး မှိုတက်သော အသီးအနှံနှင့် အစားအစာ များကို စားသုံးခြင်းမပြုဘဲ စွန့်ပစ် ခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။
အခြား aflatoxins နှင့် ပမာဏသတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲ
Little is known about the level of dietary exposure to aflatoxins necessary to affect health, especially in humans, and diagnosis of chronic toxicity is very difficult. It is generally agreed that the best approach is to minimise the levels in all foods as far as is technically possible and to assume that any dietary exposure is undesirable.
The incidence of chronic aflatoxicosis in humans is unknown and is almost impossible to estimate because the symptoms are so difficult to recognise
Water activity isameasurement of the availability of water for biological reactions. It determines the ability of micro-organisms to grow. If water activity decreases, micro-organisms with the ability to grow will also decrease.
Eight fungal isolates were recovered from polluted soils namely, Trichoderma viride, Trichoderma spirale, Neosartorya pseudofischeri, Neosartorya aureola, Aspergillus flavus, Aspergillus terreus, Penicillium griseofulvum and Trichoderma longibrachiatum. The optimum growth temperature range for the eight fungi was 30oC and 40oC. There was no growth at 50oC for all isolates except some slight growth by Aspergillus flavus. Optimum growth at pH7and pH9and poor growth at pH5was noted. This study will contribute to the database on locally available fungal diversity and their ecology.
Take detoxifying supplements
Will help body detoxify itself of aflatoxin and raise immunity against its effects. Supplements include chlorophyll, milk thistle, marshmallow root, dandelion root and activated charcoal
အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ဟူသော စကားလုံးသညျ Aspergillus flavus မှို နှငျ့ toxin (အဆိပျ) စကားလုံးနှဈလုံးကိုပေါငျးစပျချေါဝျေါသော လကျတငျ စကားလုံးဖွဈသညျ။ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) သညျ မှိုမြားမှထုတျလုပျသော အဆိပျ ၊ မိုကျကိုတျောဆငျ (Mycotoxin) တဈမြိုးဖွဈသညျ။ ထို အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) မြားသညျ အလှနျအဆိပျပွငျးထနျသော ဓါတျပေါငျးမြားဖွဈပွီး လူနှငျ့အခွား တိရစ်ဆာနျမြားကို ခကျြခွငျးအဆိပျသငျ့ပွီးအန်တရာယျဖွဈစနေိုငျသလို နာတာရှညျအဆိပျသငျ့ကာ ကငျဆာရောဂါဖွဈစေ၍ အသကျ ဆုံးရှုံးနိုငျသညျ။
စိုကျပြိုးရေးသီးနှံမြားတှငျကရြောကျဖကျြဆီးတတျသောမှိုရောဂါမြားဖွဈစသေညျ့မှိုအမြိုးမြိုးအနကျ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) အဓိကထုတျသောမှိုမြားမှာ Aspergillus flavus နှငျ့ Aspergillus parasiticus တို့ဖွဈ ကွသညျ။ အခွားAspergillus မှိုမြိုးရငျးဝငျမြားဖွဈသော Aspergillus nomius and Aspergillus niger တို့သညျလညျး အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ထုတျကွသညျ။ Aspergillus မှိုမြိုးရငျးဝငျမှိုမြားသညျ မွကွေီး၊ သီးနှံပငျကွှငျးပငျကနျြမြား နှငျ့လထေဲတှငျပြံ့နှံ့နသေညျ။ ကမ်ဘာကွီး၏ ပူနှေး စှတျစို သော နရောဒသေမြား တှငျ၎င်းငျးမှိုမြား ပေါကျရောကျမှုမြားသညျ။
၎င်းငျးမှိုမြားသညျ စိုကျပြိုးသီးနှံအမြားစုနှငျ့သိုလှောငျသီးနှံမြားတှငျကရြောကျတတျသညျ။ အစိုဓါတျ အနညျးငယျနှငျ့ အပူခြိနျ (၁၃-၃၇) ဒီဂရီ စငျတီဂရိတျတှငျပေါကျပှားနိုငျပွီး အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) မြားထုတျလုပျနိုငျ သညျ။
အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) မြား တှငျ B1, B2, G1, နှငျ့ G2 ဟူသောအမြိုးအစား (၄) မြိုးရှိပွီး သဘာဝ အတိုငျးအစားအစာမြားတှငျတှရေ့သညျ။ ၎င်းငျးတို့အနကျ B1 အမြိုးအစားသညျ အစားအစာမြား တှငျအမြားဆုံး တှရေ့ပွီး အလှနျအဆိပျသငျ့စတေတျကာ လူကို ကငျဆာဖွဈစသေညျ။ ၎င်းငျးအပွငျ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျသောအစာမြားကိုစားသောကျရသော နို့စားနှားမြားမှ ထုတျလုပျရရှိသော နို့နှငျ့နို့ထှကျပစ်စညျးမြားတှငျ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) မှဆငျးသကျလာသော ဓါတျပေါငျးဖွဈသညျ့ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) M1 နှငျ့ M2 အမြိုးအစားမြားပါဝငျသညျ။
၁၉၆၀ တှငျ ဗွိတိနျနိုငျငံတှငျ ကွကျဆငျ အကောငျ တဈသိနျးနှငျ့အခွားကွကျခွံမြားမှကွကျမြားတပွိုငျနကျ သဆေုံးရာမှ ကြှေးသောအစာ(မွပေဲပါဝငျသောအစာ)မှ အဆိပျသငျ့မှုဖွဈကွောငျးခွရောခံမိပွီး နောကျပိုငျးတှငျ ထိုအစာမြားတှငျ အဆိပျဖွဈပျေါခွငျးမှာ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ကွောငျ့ဖွဈကွောငျးသိရှိနိုငျခဲ့သညျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံတှငျ ၁၉၇၄ ခုနှဈတှငျ လူပေါငျး (၄၀၀) ခနျ့ သညျ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin ) ပါဝငျသော ပွောငျးမြားကိုစားသုံးပွီးနောကျ အသညျးရောငျအသားဝါဖွဈကာ ဖြားနာမှုဖွဈပှားခဲ့ပွီး လူပေါငျး (၁၀၀) ကြျောသဆေုံးခဲ့သညျ။ ကငျညာနိုငျငံတှငျလညျး ၂၀၀၄ ခုနှဈ၌ အလားတူဖွဈရပျမြိုးလူပေါငျး (၃၁၇) တှငျဖွဈပှား ရာ (၁၂၅) ယောကျ အသကျဆုံးရှုံးခဲ့သညျ။
စိုကျပြိုးရေးထှကျကုနျမြား ဖွဈသောနှံစားသီးနှံမြား၊ ဆီထှကျသီးနှံမြား၊ ဟငျးခတျအမှေးအကွိုငျမြားနှငျ့ အခှံမာအသီး၏အဆံမြားမှထုတျလုပျသောအစားအစာပစ်စညျးမြားတှငျ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျနိုငျလသေညျ။ သငျ့လြျောသောသိုလှောငျမှုအခွအေနမေရှိသောနှမျး၊နကွော၊ပွောငျး၊မွပေဲ၊ငရုတျ၊ ဂြုံ၊ ပဲပုပျ၊ ငရုတျ ကောငျး၊ အသီးခွောကျမြား၊ဝါစေ့၊ ၊ ကှမျးသီး၊ ပဲအမြိုးမြိုး၊ သဖနျးသီး၊ သလဲသီး၊ ပီလောပီနံနှငျ့ အဆံပါသောအသီးမြား စသညျတို့တှငျ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျနိုငျသညျ။ နို့၊ ခြီးဈနှငျ့ အခွားသောနို့ထှကျပစ်စညျး မြားသညျလညျး အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျနိုငျမှု အန်တရာယျမွငျ့မားသညျ။ ကမ်ဘာကွီး၏ ပူနှေးသော ဒသေမြားမှကုနျပစ်စညျးမြားတှငျ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျမှု အမွငျ့မား ဆုံးကိုတှရေ့ပွီး ရာသီဥတု ပွောငျးလဲမှုနှငျ့လှနျစှာဆကျစပျလြှကျရှိသညျ။
အစားအစာထုတျလုပျသောမူလကုနျပစ်စညျးမြားတှငျ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ထုတျသော မှိုမြား ပါဝငျ မှုရှိပါက အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) သညျ ဆကျလကျတညျမွဲနပွေီး ၎င်းငျးမှထုတျလုပျသော ဆကျစပျပစ်စညျး မြားတှငျ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျနိုငျသောကွောငျ့သတိထားသငျ့ပသေညျ။ ပမာအားဖွငျ့ မွပေဲထော ပတျတှငျ ဤပွဿနာကိုတှရှေိ့နိုငျသညျ။
အန်တရာယျဖွဈစရေနျလုံလောကျသောမွငျ့မားသော အဖျလာတျောဆငျ(Aflatoxin) ပမာဏရရှိပါက အော့အနျခွငျး၊ ဗိုကျအောငျ့ခွငျး၊ အဆုတျထဲရဝေငျခွငျးစသညျတို့လတျတလောခံစားရတတျသညျ။ ရရှေညျတှငျ အကွောဆှဲ၍ ခန်တာကိုယျ တုနျတကျခွငျး၊မမွေ့ောခွငျး၊ကငျဆာဖွဈခွငျး၊ မြိုးရိုးဗီဇပွောငျးလဲခွငျးနှငျ့ အသကျဆုံးသညျအထိ အန်တရာယျဖွဈစနေိုငျသညျ။ အသညျးကို ထိခိုကျပကျြဆီးမှုအမြားဆုံး ဖွဈစနေိုငျပွီး အခွားသောကိုယျခန်တာအစိတျ အပိုငျးဖွဈသညျ့ အဆုတျ၊ ကြောကျကပျ၊ ဦးနှောကျနှငျ့နှလုံး တို့တှငျလညျး အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ပမာဏ ပါဝငျမှု မွငျ့မားပွီး တဈခုခွငျး ပကျြစီးသညျကို တှရေ့ပါသညျ။
အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ထုတျသောမှိုတဈမြိုးဖွဈသော Aspergillus flavus သညျ ခွောကျသှသေ့ော ရာသီဥတုအခွအေနတှေငျ စိုကျပြိုးထားသောမွပေဲတှငျ၎င်းငျးမှိုကရြောကျမှုကိုအားပေးတတျပွီး ပွောငျးစိုကျခငျး တှငျ အငျးဆကျပိုးတို့ကရြောကျဖကျြဆီးပါက Aspergillus flavus မှို ပိုမိုကရြောကျနိုငျလသေညျ။ သီးနှံမြား သိုလှောငျရာတှငျ အပူခြိနျ ၁၃-၃၇ ဒီဂရီစငျတီဂရိတျနှငျ့ အစိုဓါတျ (approximate minimum Aw 0.82) အနညျးဆုံး ၀.၈၂ ရရှိလြှငျပငျ Aspergillus flavus ပေါကျပှားတတျပွီး အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ထုတျလုပျနိုငျလသေညျ။
သိုလှောငျထားသောသီးနှံမြားတှငျ မှိုမြားပေါကျပှားမှုနှငျ့အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ထုတျလုပျမှုသညျလညျး အရေးကွီးသညျ။ အထူးသဖွငျ့ သိုလှောငျသောသီးနှံသညျ လုံလောကျသောခွောကျသှမှေု့မရရှိခွငျး၊ အငျးဆကျ ဖကျြပိုးမြားကရြောကျမှုရှိခွငျးတို့ကွောငျ့မှိုမြားပေါကျပှားပြံ့နှံ့စသေညျ။
အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) သညျပွိုကှဲရနျမလှယျကူသညျ့ တညျမွဲနနေိုငျသော ဓါတျပေါငျးမြားဖွဈ သညျ။ မွငျ့မားသောအပူခြိနျတှငျပငျတညျမွဲနနေိုငျပွီး အနညျးငယျသာပွိုကှဲနိုငျသညျ။ သို့သျောလညျး အပူပေးခွငျးနှငျ့ ခကျြပွုတျခွငျးတို့ ကွောငျ့ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျမှုအားလုံးပွိုကှဲပကျြဆီးမှု မဖွဈနိုငျပေ။ ဥပမာအားဖွငျ့ ကျောဖီစေ့ အား အပူခြိနျ ၁၈၀ ဒီဂရီစငျတီဂရိတျတှငျ ၁၀ မိနဈ အပူပေးရာ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin B1) ပါဝငျမှု ၅၀ ရာခိုငျနှုနျး သာလြော့ကသြှားသညျ။
ပဲမြား၊ အစအေ့ဆံမြားအား အပူခြိနျ ၁၀၀ နှငျ့ ၁၅၀ ဒီဂရီစငျတီဂရိတျတှငျ ၉၀ မိနဈ အပူပေးရာ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin B1) ပါဝငျမှု ၄၁.၉ ရာခိုငျနှုနျးနှငျ့ ၈၁.၂ ရာခိုငျနှုနျးအထိ လြော့ကစြကွေောငျးစမျးသပျတှရှေိ့ ရသညျ။ သို့သျောထိုသို့အပူခြိနျကွာမွငျ့စှာပေးခွငျးသညျ ပဲမြား အစအေ့ဆံမြားတှငျပါဝငျသော အဟာရဓါတျမြား၊ ဗီတာမငျမြားကို ပကျြဆီးစသေညျ့အတှကျ အပူပေးခွငျးသညျ တိကသြော၊ လိုအပျသောဖွခွေငျးခကျြမဟုတျပေ။
မွနျမာနိုငျငံမှ ထုတျလုပျသောမွပေဲဆီ၊ နှမျးဆီး မြား (ဆုံဆီ နှငျ့ စကျဆီ) တှငျ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျမှု ရှိရ ခွငျးမှာ ဆီကွိတျသောဆုံ (သို့) စကျမြားတှငျ မှိုပေါကျပှားမှုမြားရှိနိုငျသလို မွပေဲ၊ နှမျးတို့တှငျလညျး ထိုမှိုမြားပါဝငျမှုကွောငျ့ဖွဈနိုငျသညျ။
ငရုတျသီးမှုနျ့ ပွုလုပျရနျအတှငျ ငရုတျသီးမြားမြားသိုလှောငျရာတှငျအစိုဓါတျကို အတတျနိုငျဆုံးလြော့ခရြနျဖွဈ သျောလညျး၊ ခွောကျသှားပါက သယျယူပို့ဆောငျရာတှငျ အသီးမြားကှဲအကျကာ အစမြေ့ားထှကျကကြုနျသဖွငျ့ အလေးခြိနျလြော့သှားခွငျး၊ အစိုဓါတျမရှိသဖွငျ့ အလေးခြိနျလြော့သှားခွငျး စသညျတို့မဖွဈစရေနျအတှကျ အစိုဓါတျကိုလိုအပျသလောကျမလြော့ခွငျးမြားကွောငျ့ မှိုပေါကျပှားမှုကိုအားပေးစသေညျ။ ၎င်းငျးမှိုမြားပါဝငျသော ငရုတျသီးမြားကို အမှုနျ့ကွိတျပါက အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျမှုရှိမညျဖွဈသညျ။
အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျမှုကို TLC (Thin layer chromatography), HPLC (High Performance Liquid Chromatography) နှငျ့ ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) စသော ခတျေမီနညျးပညာမြားဖွငျ့စမျးသပျစဈဆေးနိုငျသညျ။ သို့သျော သီးနှံအစုအပုံမြားတှငျမှိုနှငျ့ အဖျလာ တျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျမှုကို စမျးသပျရာတှငျ လုံလောကျသော နမူနာနှငျ့ ကိုယျစားပွုနမူနာ ဖွဈရနျ လိုအပျသညျ။
အမရေိကနျနိုငျငံအစားအစာနှငျ့ဆေးဝါးကှပျကဲရေး((FDA) မှ အစားအစာမြားတှငျ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျမှု သတျမှတျထားသောနှုနျးထားမှာ သနျး၁၀၀၀ လြှငျ ၂၀ (20 ppb) အထိသာ ပါဝငျရမညျ ဖွဈသညျ။ တိရစ်ဆာနျအစားအစာမြားတှငျမူ သနျး၁၀၀၀ လြှငျ ၃၀၀ (300 ppb) အထိခှငျ့ပွုထားသညျ။
ဥရောပသမဂ်ဂနိုငျငံမြားတှငျ အစားအစာ၌ အမွငျ့ဆုံးပါဝငျနိုငျမှုကနျ့သတျထားသောနှုနျးထားမှာ သနျး၁၀၀၀ လြှငျ ၄ - ၁၅ (4 to 15 ppb) ဖွဈသညျ။
မရိတျသိမျးမီ စိုကျခငျး၌ပငျ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျမှုကို ထိနျးခြုပျကာကှယျခွငျးသညျ အကောငျး ဆုံးနညျးလမျးဖွဈသညျ။ ကောငျးမှနျသောစိုကျပြိုးရေးနညျးလမျးကောငျးမြား Good Agricultural Practice (GAP) ကို လုပျကိုငျဆောငျရှကျခွငျးဖွငျ့ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ထုတျလုပျနိုငျသောမှိုပေါကျပှားမှု၊ ပါဝငျမှုကို ထိနျးခြုပျကာကှယျ နိုငျပါသညျ။
မြိုးစကေို့ ဟိုမိုငျး၊ ကာဗငျဒါဇငျ၊ ဘီနိုမိုငျးစသောဆေးတို့ဖွငျ့လူးနယျစိုကျပြိုးပါ။
သီးနှံရငျ့မှညျ့မှုအဆငျ့မှနျကနျသောအခြိနျနှငျ့ မှနျကနျသငျ့လြျောသောအစိုဓါတျရှိခြိနျတှငျ ခူးဆှတျရိတျ သိမျးပါ။
ရိတျသိမျးခြိနျနောကျပိုငျးနှငျ့ သိုလှောငျခြိနျတှငျအရေးအကွီးဆုံးနှငျ့ထိရောကျသောကာကှယျနညျးမှာ အစိုဓါတျပါ ၀ငျမှုကို ထိမျးခြုပျသောနညျးဖွဈသညျ။
အစိုဓါတျသငျ့လြျောသောအခြိနျတှငျရိတျသိမျးခွငျး၊ ရိတျသိမျးပွီးသီးနှံမြားအား သိုလှောငျရာတှငျ သတျမှတျထား သော အစိုဓါတျရရှိအောငျဆောငျရှကျခွငျးသညျမှိုမြားပေါကျပှားမှုနှငျ့ အဖျလာတျောဆငျ(Aflatoxin) ထုတျလုပျမှု ကိုတားဆီးပေးရာတှငျ အလှနျအရေးပါသညျ။ သိုလှောငျရာ၌ ပွောငျးအတှကျ ၂၀ ဒီဂရီစငျတီဂရိတျတှငျ လုံခွုံစိတျ ခရြသောအစိုဓါတျသညျ ၁၄ ရာခိုငျနှုနျး ဖွဈသျောလညျး မွပေဲအတှကျမူကား ၇ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ဖွဈသညျ။ ထိုအစိုဓါတျကို သိုလှောငျရာနှငျ့ သယျယူပို့ဆောငျရာတှငျထိနျးသိမျးထားရှိရနျလိုအပျသညျ။
အပူခြိနျ ၁၃ ဒီဂရီစငျတီဂရိတျအောကျတှငျ Aspergillus flavus မှိုပေါကျပှားမှု နှေးကှေးသှားပွီး ၃၇ ဒီဂရီစငျတီဂရိတျ တှငျ ပေါကျပှားမှု အမွနျဆုံးဖွဈသညျ။
ယခုအခါ မွနျမာနိုငျငံမှ ထိုငျးနိုငျငံသို့တငျပို့မညျ့ မွပေဲမြားတှငျ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျမှုကို သနျး၁၀၀၀ လြှငျ ၂၀ (၂၀ ppb) အထိသာခှငျ့ပွုပွီး စိုကျပြိုးရေးဦးစီးဌာနအောကျရှိ သီးနှံကာကှယျ​ရေးဓါတျခှဲ ခနျးမှ စဈဆေးမှုမြားပွုလုပျကာ လကျမှတျမြားထုတျပေးလြှကျရှိသညျ။
ဘေးကငျးလုံခွုံစိတျခရြသောအစားအစာအတှကျ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျမှုကို တရားဝငျအတညျ ပွုပွဌာနျးထားခွငျးမရှိသေးသျောလညျး ဖှံ့ဖွိုးပွီးနိုငျငံမြားတှငျ ရောငျးခသြော အစားအစာမြားတှငျ အဖျလာ တျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျမှုသညျလှနျစှာနညျးပါးသညျ။
အစားအစာမြားတှငျ အဖျလာတျောဆငျ (Aflatoxin) ပါဝငျမှုကို သာမာနျမကျြစိဖွငျ့ခှဲခွားနိုငျခွငျးမရှိသဖွငျ့ အကောငျးဆုံးကွိုတငျကာကှယျနညျးမှာ အစားအစာမြားကို သခြောစှာစဈဆေးပွီး မှိုတကျသော အသီးအနှံနှငျ့ အစားအစာ မြားကို စားသုံးခွငျးမပွုဘဲ စှနျ့ပဈ ခွငျးပငျဖွဈပသေညျ။
အခွား aflatoxins နှငျ့ ပမာဏသတျမှတျရနျခကျခဲ